politika Fiarovana fiainan'olona - Medical Aid International
politika Fiarovana fiainan’olona
Ny teny hoe “Company”, “Company’s”, “Us”, “We”, “Our” dia manondro ilay orinasa voasoratra anarana Medical Aid International orinasa voasoratra anarana any Angletera sy Wales eo ambany laharana 7288956. Medical Aid International no Controller momba ny angon-drakitrao momba ny tanjon’ny lalàna GDPR 2018 (ny “Act”). Ny orinasam-pandraharahana ara-tsosialy dia miorina ao amin’ny Unit 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB. Ny teny hoe “tranokala” dia manondro ny anaran’ny sehatra http://medaid.co.uk ary ny atiny rehetra ao anatiny.
Rehefa mampiasa ny tranokalanay sy ny serivisinao ianao dia manaiky ny fanangonana sy ny fampiasana ny mombamomba anao araka ny voalaza ato amin’ity Politika ity. Raha manova ny Politika sy / na ny fomba fanaovanay izahay dia havaozinay ity Politika ity mba hampahafantaranay anao ny momba izay angoninay, ny fomba fampiasanay azy ary amin’ny toe-javatra mety hanambaranay azy. Manentana anao izahay hanao tsoratadidy ity pejy Internet ity ary hijery ity Politika ity tsy tapaka. Ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia manazava ny fomba fijerinay sy ny politikantsika amin’ny fikarakarana ny angon-drakitrao. Amin’ny alàlan’ny fampiasana http://medaid.co.uk ianao dia manaiky an’ity politika momba ny fiainana manokana ity sy ireo fomba fanao hazavaina ao anatiny.
Raha te hiala amin’ny marketing sy ny serasera avy aminay ianao dia azonao atao izany amin’ny alàlan’ny rohy opt opt ao amin’ireo mailaka alefanay, na amin’ny alàlan’ny fifandraisana aminay ao amin’ny Unit 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB na tim @ medaid .co.uk
Ity politika ity dia miaraka amin’ny fampiasa ato aminay http://medaid.co.uk ary ny antontan-taratasy hafa resahina ao, dia mamaritra ny fototr’izay angon-drakitra manokana angoninay avy aminao, na omenao anay, dia ho zahanay. Azafady mba vakio tsara ity manaraka ity hahafantarana ny fomba fijerinay sy ny fanaonay momba ny angon-drakitrao manokana sy ny fomba hitondranay azy.
Ho an’ny tanjon’ny General Data Protection Regulation, ny mpanara-maso data dia ny Medical Aid International an’ny Unit 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB.
Data azonay angonina aminao
Raha manao raharaham-barotra izahay dia mety tsy maintsy manodina ireto karazana data ireto momba anao:
Fampahalalana omenao anay.
Azonao atao ny manome anay fampahalalana momba anao amin’ny alàlan’ny famenoana endrika ao amin’ny tranokalanay http://medaid.co.uk na amin’ny fifandraisana aminay amin’ny alàlan’ny telefaona, mailaka na mivantana ary amin’ny fomba hafa rehetra. Anisan’izany ny angona azonao omena anay rehefa misoratra anarana hampiasa ny tranokalanay izahay, misoratra anarana amin’ny serivisy fandefasana mailaka na mangataka fanazavana fanampiny.
Ny data omenao anay dia mety misy:
Anarana voalohany, anarana afovoany, anaram-bosotra, adiresy, adiresy mailaka ary laharana telefaona tianao. Ny fampahalalana takiana dia mba hitarika orinasa. Ity data ity dia tsy amidy amin’ny antoko fahatelo dia tsiambaratelo ho an’ny orinasa.
Data azonay angonina momba anao:
Rehefa mitsidika ny tranokalanay ianao dia mety ho voasambotra momba anao ireto angona manaraka ireto.
Fampahalalana ara-teknika, ao anatin’izany ny adiresy Internet protokol (IP) ampiasaina hampifandraisana ny solosainao amin’ny Internet, ny fampahalalana momba ny fidirana, ny karazan-tsokajinao sy ny kinovanao, ny fari-potoana misy ny vanim-potoana, ny karazana plug-in sy ny kinova-n’ny plug-in, ny système d’exploitation ary ny platform;
Data momba ny fitsidihanao ny tranokalanay, ao anatin’izany ny tsindry Uniform Resource Locators (URL) mankany, hatrany ary avy amin’ny tranokalanay (ao anatin’izany ny daty sy ora); vokatra nojerenao na notadiavinao; ny fotoana valin’ny pejy, ny lesoka amin’ny fisintomana, ny halavan’ny fitsidihana ny pejy sasany, ny fampahalalana momba ny fifaneraserana pejy (toy ny fikororohana, ny tsindry ary ny totozy), ary ny fomba ampiasaina hijerena lavitra ny pejy sy ny laharana finday ampiasaina hiantsoana ny laharan’ny serivisy ho an’ny mpanjifantsika .
Data azonao raisina avy aminao avy amin’ny loharano hafa
Mety hahazo angona momba anao izahay raha mampiasa tranonkala hafa ampiasainay na serivisy hafa omenay. [In this case we will have informed you when we collected that data that it may be shared internally and combined with data collected on this site.] Miara-miasa akaiky amin’ny antoko fahatelo izahay (ao anatin’izany, ohatra, ny mpiara-miasa, ny sub-kontraktor amin’ny serivisy ara-teknika, fandoavam-bola sy fandefasana, tamba-jotra dokam-barotra, mpamatsy fanadihadiana, mpamatsy fampahalalana fikarohana, maso ivoho momba ny trosa) ary mety hahazo vaovao momba anao avy amin’izy ireo .
Ahoana no ampiasanay ny angona voatanisa momba anao
Ny data omenao anay
Hampiasainay ity angon-drakitra ity mba hanatanterahana ny adidinay avy amin’ny fifanarahana nifanaovanareo sy izahay ary hanome anao ny mombamomba, ny vokatra ary ny serivisy angatahinay aminay: –
hanome anao vaovao momba ny entana sy serivisy hafa atolotray izay mitovy amin’ireo efa novidinao na nanontanianao;
hanome anao, na hanome alalana ny antoko fahatelo voafantina hanome anao, miaraka amin’ny fampahalalana momba ny entana na serivisy heverinay fa mahaliana anao. Raha mpanjifa efa misy ianao dia hifandray aminao amin’ny alàlan’ny fitaovana elektronika (mailaka na SMS) ihany izahay miaraka amin’ny fampahalalana momba ny entana sy serivisy mitovy amin’ireo izay foto-kevitry ny fivarotana teo aloha na ny fifampiraharahana momba ny varotra taminao. Raha mpanjifa vaovao ianao, ary mamela ny antoko fahatelo voafantina hampiasa ny angon-drakitrao, dia hifandray aminao amin’ny alàlan’ny fitaovana elektronika izahay (na izy ireo) raha nanaiky izany ianao. Raha tsy tianao hampiasa ny angon-drakitrao amin’ireto fomba ireto izahay, na hampita ny antsipirihanao amin’ny antoko fahatelo ho an’ny tanjona ara-barotra, azafady tsindrio ilay boaty mifandraika miorina amin’ny endrika izay angoninay ny angon-drakitrao (ny [forme de order OR fisoratana anarana]);
hampahafantatra anao momba ny fanovana ny serivisinay;
hahazoana antoka fa ny atiny avy amin’ny tranokalanay dia aseho amin’ny fomba mahomby indrindra ho anao sy ho an’ny solosainao.
Data azonay angonina momba anao
Hampiasa ity angona ity izahay: –
hitantana ny tranokalanay sy ho an’ny asa anatiny, ao anatin’izany ny famahana olana, ny fandalinana ny angona, ny fitsapana, ny fikarohana, ny antontan’isa ary ny fanadihadiana;
hanatsara ny tranokalanay hahazoana antoka fa aseho amin’ny fomba mandaitra indrindra ho anao sy ho an’ny solosainao ny atiny;
hahafahanao mandray anjara amin’ny endri-javatra ifandraisan’ny serivisinay, rehefa misafidy ny hanao izany ianao;
ao anatin’ny ezakay hitazomana ny tranokalantsika ho azo antoka sy azo antoka;
handrefesana na hahatakarana ny fahombiazan’ny dokam-barotra atolotray anao sy ny hafa ary hanaterana dokam-barotra mifandraika aminao;
hanome sosokevitra sy tolo-kevitra ho anao sy ireo mpampiasa hafa amin’ny tranokalanay momba ny entana na serivisy mety hahaliana anao na izy ireo.
Azontsika atao ny mampifangaro an’io fampahalalana io amin’ny fampahalalana omenao anay sy ny angona angoninay momba anao. Azontsika atao ny mampiasa an’io fampahalalana io sy ireo fampahalalana mitambatra ho an’ireo tanjona voalaza etsy ambony (miankina amin’ny karazana data azontsika).
Fampahafantarana ny angon-drakitra izay tazoninay
Azonay atao ny mizara ny angon-drakitrao amin’ireo mpikambana ao amin’ny vondrona misy anay, izay midika hoe ireo mpiara-miasa aminay, ilay orinasanay farany sy ireo mpiara-miasa aminy, araka ny voafaritra ao amin’ny fizarana 1159 an’ny lalàna momba ny orinasa UK 2006.
Azontsika atao ny mizara ny mombamomba anao amin’ny antoko fahatelo voafantina ao anatin’izany:
Mpiara-miasa, mpamatsy ary mpifanaraka amin’ny orinasa amin’ny fanatanterahana ny fifanarahana ifanaovanay[them or] ianao.
Ireo mpanao dokam-barotra sy tambajotra fanaovana dokam-barotra izay mitaky ny angon-drakitra mba hisafidianana sy handefasana doka mifandraika aminao sy amin’ny hafa. Izahay dia tsy mampahafantatra fampahalalana momba ny olona azo fantarina amin’ny mpanao dokam-barotra, fa afaka manome azy ireo fampahalalana miangona momba ny mpampiasa anay (ohatra, azonay ampahafantarina azy ireo fa 500 ny lehilahy latsaky ny 30 taona no nanindry ny doka nataony tamin’ny andro iray). Azontsika atao koa ny mampiasa fampahalalana mitambatra toy izany mba hanampiana ireo mpanao dokambarotra hahatratra ny karazana mpihaino tadiavin’izy ireo (ohatra, ny vehivavy amin’ny SW1). Azontsika atao ny mampiasa ny angona manokana angoninay avy aminao mba hahafahanay manaja ny hetahetan’ny mpanao dokam-barotra aminay amin’ny fampisehoana ny doka ataon’izy ireo amin’ilay mpihaino kendrena.
Ireo mpanadihady sy mpanome motera fikarohana izay manampy anay amin’ny fanatsarana sy fanatsarana ny tranokalanay.
Ireo masoivohom-bola momba ny trosa mba hanombanana ny tombam-bolanao raha toa ka misy fepetra amin’ny fifanarahana aminao io.
Azonay ambara amin’ny antoko fahatelo ny mombamomba anao.
Raha sendra mivarotra na mividy orinasa na fananana izahay, amin’izay dia azonay ampahafantarina amin’ny mpivarotra na mpividy izany orinasa izany.
Raha ny orinasa na ny ankamaroan’ny fananany rehetra dia azon’ny antoko fahatelo, ary raha izany dia ny data ho azy manokana momba ny mpanjifany no iray amin’ireo fananana nafindra.
Raha adidintsika ny mampahafantatra na mizara ny angon-drakitrao manokana mba hanarahana izay adidy ara-dalàna rehetra, na mba hampiharana na hampiharana ny fepetra sy ny fampiasa amin’ny http: //medaid.co.uk \_ termsandconditions sy fifanarahana hafa; na mba hiarovana ny zon’ny, ny fananana, na ny fiarovana ny Orinasa, ny mpanjifanay na ny hafa. Anisan’izany ny fifanakalozana vaovao amin’ireo orinasa sy fikambanana hafa ho fiarovana ny hosoka sy ny fihenan’ny trangan-trosa.
Aiza no itahirizanay ny angon-drakitrao?
Ny tahirin-kevitra rehetra omenao anay dia voatahiry ao amin’ireo mpizaranay azo antoka. Izay fifanakalozana fandoavam-bola dia hohafinafina[using SSL technology] . Izay nomenay anao (na ny toerana nisafidiananao) teny miafina izay ahafahanao miditra amin’ny faritra sasany amin’ny tranokalanay, dia tompon’andraikitra amin’ny fitazonana tsiambaratelo an’ity tenimiafinao ity ianao. Miangavy anao izahay tsy hizara teny miafina amin’ny olona satria mety hiteraka tsy fahatokisan-tena izany.
Mampalahelo fa tsy azo antoka tanteraka ny fampitana vaovao amin’ny alàlan’ny Internet. Na dia hanao izay farany azonay atao aza izahay mba hiarovana ny angon-drakitrao manokana, tsy afaka miantoka ny fiarovana ireo antontan-kevitra azonao ampitaina amin’ny tranokalanay izahay; mety hampidi-doza anao ny fampitana. Raha vantany vao voarainay ny angon-drakitrao dia hampiasa fomba fiasa henjana sy fisorohana fiarovana izahay hanandrana hisorohana ny fidirana tsy nahazoana alalana.
Manan-jo tsy hanaiky an’ity politika manokana ity ianao. Manan-jo hangataka aminay ianao mba tsy hikirakira ny angon-drakitrao manokana ho an’ny tanjona ara-barotra. Izahay matetika dia hampahafantatra anao (alohan’ny hanangonana ny angon-drakitrao) raha mikasa ny hampiasa ny angon-drakitrao izahay ho an’izany tanjona izany na raha mikasa ny hampahafantatra ny mombamomba anao amin’ny antoko fahatelo izahay amin’izany tanjona izany. Azonao atao ny mampiasa ny zonao hisorohana ny fanodinana toy izany amin’ny alàlan’ny fanamarinana boaty sasany amin’ireo endrika ampiasainay mba hanangonana ny angon-drakitrao. Azonao atao koa ny mampiasa ny marina amin’ny fotoana rehetra amin’ny alàlan’ny fifandraisana aminay ao amin’ny Unit 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB na tim@medaid.co.uk
Ny tranokalanay dia mety, indraindray, dia misy rohy mankany sy avy amin’ny tranokalan’ny tambajotra mpiara-miasa, mpanao dokambarotra ary mpiara-miasa aminay. Raha manaraka rohy mankamin’ny iray amin’ireo tranokala ireo ianao dia mariho tsara fa ireo tranonkala ireo dia manana politikany manokana ary tsy manaiky andraikitra na andraikitra amin’ireto politika ireto izahay. Azafady mba zahao ireo politika ireo alohan’ny handefasanao angona manokana amin’ireo tranonkala ireo
Manome anao ny zo hiditra amin’ny angona voatahiry momba anao ny lalàna. Ny zonao hiditra dia azo ampiharina mifanaraka amin’ny lalàna. Azonao atao ny mampiasa ny tsara amin’ny fotoana rehetra amin’ny alàlan’ny fifandraisana aminay ao amin’ny Unit 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB na tim@medaid.co.uk
Mampiasa cookies ny tranonkalanay hanavahana anao amin’ireo mpampiasa hafa amin’ny tranonkalantsika. Izany dia manampy anay hanome anao traikefa tsara rehefa mijery ny tranokalanay ianao ary mamela anay hanatsara ny tranokalanay. Hanentana anao hanaiky ny fampiasana cookies ny tranokala, amin’ny alàlan’ny fanindriana ny OK dia manaiky ny fampiasanay ny cookies voalaza eto. Azonao atao ny mampiasa ny zonao tsy hanaiky ny fampiasana cookies amin’ny alàlan’ny tsindrio OK.
Ny cookie dia rakitra kely litera sy tarehimarika izay tahirizinay ao amin’ny tranokalanao na amin’ny kapila mangirana ao amin’ny solosainao raha manaiky ianao. Cookies dia misy fampahalalana izay nafindra tao amin’ny kapila solosainao.
Azontsika atao ny mampiasa ireto cookies manaraka ireto:
Cookie tena ilaina. Ireto dia cookies izay takiana amin’ny fampandehanana ny tranokalanay. Anisan’izany, ohatra, ny cookies izay ahafahanao miditra amin’ny faritra azo antoka ao amin’ny tranokalanay, mampiasa sarety fiantsenana na mampiasa serivisy fanoratana e-billing.
Cookies fandalinana / fampisehoana. Avelany izahay hahafantatra sy hanisa ny isan’ny mpitsidika ary hahita ny fomba fivezivezen’ny mpitsidika manodidina ny tranonkalantsika rehefa ampiasain’izy ireo izany. Manampy antsika hanatsara ny fomba fiasan’ny tranonkalantsika, ohatra, amin’ny alàlan’ny fiantohana fa mahita mora ny zavatra tadiavin’izy ireo ny mpampiasa.
Cookie mandeha ho azy. Ireo dia ampiasaina hahafantarana anao rehefa miverina amin’ny tranokalanay ianao. Izany dia ahafahanay mampifanaraka ny atinay ho anao, miarahaba anao amin’ny anaranao ary mahatadidy ny safidinao (ohatra, ny fiteny na ny faritra tianao).
Cookie kendrena. Ireo cookies ireo dia mirakitra ny fitsidihanao ny tranokalanay, ireo pejy notsidihinao ary ireo rohy narahinao. Hampiasainay ity fampahalalana ity mba hahatonga ny tranonkalantsika sy ny doka aseho eo aminy mifandraika kokoa amin’ny zavatra mahaliana anao. Azontsika atao koa ny mizara izany fampahalalana izany amin’ny antoko fahatelo ho an’ity tanjona ity.
[Mariho azafady fa ny antoko fahatelo (ao anatin’izany, ohatra, ny tambajotra fanaovana dokambarotra sy mpamatsy tolotra ivelany toa ny serivisy fandalinana fifamoivoizana amin’ny tranonkala) dia mety hampiasa cookies ihany koa, izay tsy voafehintsika. Ireto cookies ireto dia mety ho cookies famakafaka / fampisehoana na cookies kendrena]
Sakananao ny cookies amin’ny alàlan’ny fampandehanana ny toerana misy anao amin’ny browser-nao ahafahanao mandà ny fikirana rehetra na ny cookies sasany. Na izany aza, raha mampiasa ny fikirana fanaingoana anao ianao hanakanana ny cookies rehetra (ao anatin’izany ny cookies ilaina) dia mety tsy ho azonao idirana daholo na ny ampahany amin’ny tranokalanay. Afa-tsy ny cookies tena ilaina dia tapitra ny cookies rehetra afaka 12 volana.
Ny fanontaniana, hevitra ary fangatahana momba ity politika momba ny fiainana manokana ity dia raisina an-tanan-droa ary tokony halefa any amin’ny Unit 3, Firs Farm, Stagsden, Bedfordshire MK43 8TB na tim@medaid.co.uk